FIOFANANA MOMBAN’NY FAMBOLEM-BARY ETO AFRIKA NATAO TATY EGYPTA – – Gasy Egypte
FIOFANANA MOMBAN’NY FAMBOLEM-BARY ETO AFRIKA NATAO TATY EGYPTA
Ity fiofanana ity dia natao teto amin’ny renivohitry Egypta “Caire” niampy fiofanana fampiharana tamin’ny tanàna antsoina hoe “Tanta” nandritra ny enim-bolana (aprily hatramin’ny septambra). Maro ny vahiny nasain’ny firenena egyptiana ka nandraisan’ny firenena maro anjara indrindra ny teto Afrika. Tsy diso anjara tamin’izany isika Malagasy fa tonga ny Malagasy roa (2) avy amin’ny Ministera voakasik’izany (Fambolena) nisolo tena an’I Madagasikara.
Ny antony ny fiofanana moa raha araky ny vaovao sy ny fanazavana azo avy amin’izy ireo dia: “… Mbola tena sahirana ara-tsakafo ny firenentsika miampy ireo olana hafa sedraina ankehitriny indrindra ny tahan’ny fahantrana. Hiarahana mahalala fa ny vary no foto-tsakafontsika Malagasy ka tena tombony lehibe ny fiofanana tahak’izay nisy teto Egypta ho fanatsarana ny voka-bary satria dia zara raha mahavokatra 2t/ha eo ho eo I Madagasikara. Izany taha-pahavokarana izany dia ambany tokoa raha oharina amin’ny Egypta izay mahatratra hatramin’ny 10t/ha nefa tena tsy misy orana mandavan-taona ary miampy ny toe-tany sy ny maripàna ambony dia ambony. Ny renirano Neily (Nil) no hany ampiasaina eto Egypta amin’ny fambolena ary tena mahomby.”
Efa avo lenta raha ny teknika ampiharina eto Egypta indrindra eo amin’ny fambolem-bary. Ny Malagasy monina aty aza dia vokatra avy eto an-toerana no vary vidiana isan’andro fa vitsy ihany ireo afaran’izy ireo avy any ivelany. Ny traikefa amin’izany indrindra no notovozin’ireo rehetra nanatrika ny fiofanana ka ao anatin’izay isika Malagasy.
Afa-po ary vonona ny hizara izany ireo solo-tena niatrika ny fiofanana. Nilaza ihany koa izy ireo fa tena azo tanterahina tsara sy ampiharina any Madagasikara izany fa ny finiavan’ny firenentsika sisa no andrasana miampy ilay fahefana sy ny hoenti-manana iankinan’ny fahatanterahin’ny asa rehetra (diso fantatsika loatra ny olana amin’ny resaka “budget” indrindra fa miankina amin’ny fanjakana). Tombony iray hafa hanantsika Malagasy ihany koa ny zezika sy akora natoraly izay ho ampiasaina (bio) mba ialana amin’ireo fampiasana akora simika.
Nitohy herinandro tany Oungada ny fiofanana rehefa vita ny teto Egypta, nifarana tanteraka izany ny farany volana septambra lasa teo. Izany hoe efa tafaverina soamantsara any Madagasikara moa izy ireo.
Teny tsotra sady fohy no namaritan’izy ireo ny fandalovana teto Egypta: “Tsy ratsy no sady tsy tsara Egypta fa NAHAFINARITRA…” Nandritra ny fiofanana izay naharitra fotoana ela ihany dia nivezivezy sy nifanerasera tamin’ireo Malagasy monina teto Egypta ireo mpiofana ireo. Inoanay fa tsy hanadino ary manantena aza fa mbola ho avy indray hitsidika an’I Egypta na ny fihaonana any an-tanindrazana ihany koa… Mirary soa indrindra ho azy ireo ny Malagasy eto Egypta indrindra amin’ny adidy miandry sy ny andraikitra sahanina.
Ireo vahiny Tonga, Vaovao
Fifidiana filoham-pirenena Egyptiana ny 26 – 28 martsa 2018
6 Thoughts to “FIOFANANA MOMBAN’NY FAMBOLEM-BARY ETO AFRIKA NATAO TATY EGYPTA –”
Commander Generique Cialis Super Active Acheter Cialis Prix No Prescription Pharmacies For Viagra generic viagra Hydrochlorot 50mg No Prescription Viagra Pfizer Prezzo
Viagra 100mg Import Reimport Buy Amoxicillin 500mg Uk Cheapeast secure ordering isotretinoin where to order no prescription canadian cialis Zithromax Discount Coupons
Buy Aldara Cream India Amoxicillin For Strep Throat cheapest cialis Effet Du Cialis Generique
Amoxicillin Trying To Conceive viagra pas cher paris Strep Throat 200ml Of Amoxicillin Rezept Viagra Arzt Toradol
Xenical Pas Cher Keflex Biaxin cialis vs viagra On sale discount isotretinoin tablets online visa accepted Apo Cephalexin For Dogs